Mandehandeha amin'ny alika: ny toerana tsara indrindra any Eropa | Tontolo alika
Mandehandeha amin'ny alika: ny toerana tsara indrindra any Eropa
Omar higueras | | Alika ankapobeny
Rehefa manana ankohonana isika dia sarotra ny manomana vakansy tsy misy ny mpikambana tsirairay ao aminy. Ny alika dia ao anatin'ny vatan'ny fianakaviana ihany koa, ary mendrika fialan-tsasatra toa anao izy ireo. Na dia toa sarotra aza ny mieritreritra ireo toeran-kaleha manisa fa hiara-dia amin'ny alika amam-bolo izahay dia manome toky anao aho fa eny, izany mandeha miaraka alika sy mankafy azo atao tanteraka.
Na dia tsy manamora ny aza ny politikan'ny orinasa maro dia misy safidy tsy manam-petra hahafahana mankafy ny fotoam-pialan-tsasatra miaraka amin'ireo namantsika volo. Avy eo, Mizara tolo-kevitra vitsivitsy momba ny toerana izay notsidihiko tamin'ny alikako:
4 Mandehandeha amin'izay tianao amin'ny motera
4.1 Soso-kevitra momba ny dia miaraka amina alika amin'ny alàlan'ny fiara na moto
Tokony hotadidinao fa raha handeha hiaraka amin'ny alika ianao dia tsy ho afaka hitsidika tranombakoka na foibe ara-kolotsaina, noho izany, tsy dia hahasosotra anao izany raha mikasa ny dia avy any amin'ny ny fomba fijery mifantoka bebe kokoa amin'ny fizahan-tany momba ny natiora sy ny tanàna.
Suisse angamba no iray amin'ireo safidy tsara indrindra hankafizana fitsangatsanganana lava mamakivaky ny arabe mahafinaritra sy mahafinaritra an'i Bern, na mandeha amoron-dàlana amin'ny Park voajanahary, toy ny Naturpark Gantrisch na ny Valan-javaboary voajanahary any Gruyère Pays-d'Enhaut.
Izaho manokana dia manoro hevitra anao handeha amin'ny farihy Oeschinen, izay 66 kilometatra monja avy eo Bern. Any an-danitra ilay toerana, feno rivotra madio, ary madio ny rano. Raha tsy misy fisalasalana, toerana mety izy raha miala kely amin'ny tanàna ary manana barbecue tsara ao amin'ny fianakavianao manontolo.
I Italia dia iray amin'ireo firenena notsidihiko indrindra niaraka tamin'ireo voloko. Mazava ho azy fa tsy hanome lanja ny dia amin'ny fomba fijery kanto izy ireo, fa tena hahafaly azy ireo raha raisinao hanome izy ireo mandeha lavitra mamaky ny valan-javaboary toa an'i Abruzzo, na ny Italia Dolomiti BelunesiNa dia hiditra amin'ireo faritra ireo aza ianao dia tsy maintsy manofa fiara sy GPS tsara, satria lavitra ny tobin'ny mpizahatany izy ireo.
Mety hahaliana anao izany: Ahoana ny fitsangatsanganana amin'ny alika amin'ny alàlan'ny fiara
Raha izay tianao kosa, dia ny manao dia lavitra amin'izay azonao atao mankafy ny maritrano manokana an'ny tanàna italiana, ary mandritra izany fotoana izany dia mandehana kely mamakivaky ny natiora, dia mamporisika anao aho handray izany ny Cinque Terre, ampahany amin'ny moron'ny Ranomasina Ligurian izay misy tanàna dimy, ao amin'ny faritanin'i La Spezia.
Ny alikako dia faly nandehandeha tany amin'ireo rano mangarahara teo amin'ireo lalana tery, ary nankafy toy ny ankizy nijery ny fihazakazak'izy ireo sy namoaka ny heriny tsy mety ritra izy ireo.
Raha manapa-kevitra ny ho tonga eto indray andro ianao, dia aza adino ny manandrana ireo kones malaza ao endasina trondro, sy ny menaky ny ranomandry italiana mamy. Na ny alika aza dia afaka mankafy azy ireo, satria ao amin'ny tanàna roa amin'ny dimy (Monterosso sy Riomaggiore), Misy efi-gilasy manolotra gilasy ho an'ny alika!
Raha avy any Espana ianao, dia tsy mila mandeha lavitra vao mankafy fialantsasatra tsara miaraka amin'ny namanao volo. Betsaka ny tanàna sy ny Valan-javaboary voajanahary izay notsidihiko niaraka tamin'izy ireo, ary mahatalanjona hatrany ny zava-niainana.
Any Catalonia, ohatra, mora be ny manomana làlana eo afovoan'ny natiora amin'ny alàlan'ny Montseny, ny Catalan Pyrenees na Aigüestortes. Mangatsiaka ny toetrandro ary misy renirano maro ahafahanao mandro sy misotro rano ary mangatsiaka alohan'ny hanohizanao ireo lalan-tany vahiny.
Na izany aza, toerana izay niara-nankafizinay indrindra, dia efa Asturias. Noheveriko foana fa ity Community Autonomous of Spain ity dia toy ny Canada kely: feno tendrombohitra misy alokaloka maitso tsy manam-petra, ary renirano sy farihy mahatalanjona.
Miakara amin'ny Farihy Enol, miorina ao amin'ny Picos de Europa, dia hevitra tsara hamerenana ny havokavokao sy hankafizanao ny fomba fijery. Aza adino ny Farihy Ercina, izay tsy dia lavitra loatra. Ny farihy roa dia ny vondrona fantatra amin'ny anarana hoe Lakes of Covadonga, zava-mahatalanjona roa an'ny Principality of Asturias izay tsy hanenenanao ny mahita azy.
Fa raha ny tadiavinao dia karazana dia lavitra ifantohana ankafizo ny tanàna manokana ao Asturias, mihinana cachopos ary manandrama ny tapasy fromazy cabrales nentiny niaraka tamin'ny divay tsara, drafitra làlana akaikin'ny paroasy Tivet, an'ny filankevitr'i Cabrales, miakatra any ny paroasy mahafinaritra an'i Bandujo, ao amin'ny filankevitry ny Proaza, na mankafy ny rivotra madio an'ny Pola de Somiedo, aiza, raha mailo ianao, dia afaka mahita bera volontany. Isaky ny tanàna sy tanàna rehetra ireo, ny alikako dia noraisina tsara toa antsika!
Mandehandeha amin'izay tianao amin'ny motera
Raha ny marina, ny tanàna eropeana rehetra dia azo vangiana alika raha tsy mila miatrika ny lafiny sarotra indrindra amin'ny dia miaraka amin'ny biby isika: sidina, mitady trano hipetrahana ary miditra trano fisakafoanana.
Ny fitsangatsanganana amina motera dia tsy isalasalana fa ny safidy tena mampahazo aina indrindra mba hahafahan'ny volonay mifaly amin'ny fahafinaretana ao amin'ny orinasa iray manontolo amin'ny fianakaviany, satria tsy mila mitantana na mandoa ny vidin'ny sidina mihombo amin'ny alika ianao, na mitady trano sy trano fisakafoanana tia namana. Etsy ankilany, ny volonao dia hamonjy ilay dia mankaleo ao anaty fiaramanidina.
Manome be ny motera manovaova mandeha any amin'ny toerana tianao ary mijanona amin'ny toby tsara indrindra any Eropa. Ary handrahoana sakafo dia mila manangana dakozia kely na fatana ianao fotsiny, ary mankafy lovia mafana tsara. Mazava ho azy, aza adino ny manome steak ho an'ny alikanao, izay koa miala sasatra!
Soso-kevitra momba ny dia miaraka amina alika amin'ny alàlan'ny fiara na moto
Rehefa mandeha fiara na moto, ny hevitra tsara indrindra dia ny fitondrana azy ao anaty tranom-borona mba hiarovana azy bebe kokoa raha misy freins tampoka. Na dia miasa tsara aza ny fehin-kibo ho an'ny alika, ny hevitra tsara indrindra dia ny mitondra tranom-borona hiarovana azy ireo bebe kokoa.
Raha nanapa-kevitra ny hametraka ny alikanao ao anaty tranom-borona ianao amin'ny farany, dia aza manahy be loatra momba izany. Tsy mampaninona azy ireo matetika, raha tsy efa nanao fanatanjahan-tena na nihazakazaka nandritra ny fotoana ela izy ireo. Zava-dehibe izany mandreraka azy alohan'ny dia lavitraAmin'ity fomba ity dia handeha hatory amin'ny alàlan'ny torimaso rehetra ao anaty tranony izy ary hiala sasatra kokoa. Hamarino tsara ihany koa fa ao anaty todika lavorary ny tranom-borona mba tsy haratra.
Aza velomina mihitsy izy adiny roa alohan'ny handehanana lavitra. Matetika ireo volom-baintsika dia tia ny sakafo omentsika azy ireo, fa ny fivezivezin'ny fiara dia mety hahatonga azy ireo hanipy azy sy hahatsapa ho ratsy.
hazo mijanona isaky izao ary avy eo mba haninjarany ny tongony sy hisotro rano. Raha na inona na inona antony tsy maintsy avelanao ao anaty fiara mandritra ny fotoana fohy dia tadidio foana ataovy ambany ny fitaratra, indrindra raha mafana be ny andro. Ny alika lasa mora maty rano.
Ka mba afaka milamina foana ny volonao mandritra ny dia, mieritreritra ny hitondra azy zavatra tiany, toy ny biby sobika ankafiziny, taolana na kilalao, na zavatra mampihetsi-po azy, toy ny lamba firakofana na sobika. Aza adino ny manome azy ireo fanamoriana sy fanorana indraindray mba hanamaivanana ny alahelony.
Aza manasitrana azy raha tsy ny mpitsabo azy no manome fanafody. Ny alika dia afaka mahazo fiankinan-doha simika ihany koa. Aleo foana mampiasa faharetana toy izay fanafody hampitony ny adin-tsaina mety hanjo ny alikantsika volo rehefa mandeha isika.
Farany, tadidio mampita foana ny toe-javatra vaovao amin'ny fiaraha-miory sy ny saina ary mitazona angovo tsara, izay no alain'ny alika voalohany. Aza atolotra azy mihitsy ny tranomaizina toy ny hoe fonja io, tsy maintsy mahazo aina ao izy, manasa azy hiditra amin-katsaram-panahy ary tsy hanome lanja be loatra azy. Ny tranom-borona dia mila mahatakatra azy amin'ny toerana mangina, fa tsy amin'ny toerana tsy ilaina.
Mety hahaliana anao izany: Torohevitra momba ny dia fiaramanidina miaraka amin'ny alikanao
Fitsangatsanganana hafa inona any Eropa na izao tontolo izao no amporisihinao hitety alika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Mandehandeha amin'ny alika: ny toerana tsara indrindra any Eropa
Fomba fanasitranana stye amin'ny alika
Ahoana ny fahafantarana ny fitenin'ny alika